IVedic Astrology: Luphi uphawu lwakho kunye nePlanethi? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
I-Vedic astrology yindlela yamandulo yokuqikelela ikamva. Funda ngakumbi malunga nawe kwaye ufumane uphawu lweVedic zodiac kwaye yeyiphi iplanethi elawula wena.
Kukho umahluko omkhulu phakathi kweenkwenkwezi zeVedic kunye nenkqubo yethu eyaziwa ngokubanzi eyenziwa eNtshona. Ienkwenkwezi zeVedic zikwabizwa ngokuba ziiHindu okanye iJyotish ngeenkwenkwezi. Eli sebe elithile lokuvumisa ngeenkwenkwezi libalasele ngokuchaneka nokuntsonkotha, silapha ukuze sikunike ukuqonda kwesi senzo samandulo saseIndiya, esasisetyenziswa okokuqala ziinkokheli zonqulo kwaye sinxulunyaniswa nonyango kunye nonyango. Le yindawo ekumele ukuba ufunde ngayo ngeenkwenkwezi zeVedic!
Imbali ngeenkwenkwezi zeVedic
Yeyiphi iplanethi elawula ubuntu bakho?
Imiqondiso elishumi elinambini yeenkwenkwezi yeVedic (rāśi) iyafana naleyo yeenkwenkwezi zasentshona kwaye intsingiselo yegama labo lesiSanskrit iyafana okanye isondele kakhulu kumagama abo esiNgesi. Bakwaphawulwa ngo Zodiac element (umlilo, umhlaba, umoya, amanzi) kunye a Ukumodareyitha kweZodiac .
Ulwazi lwangemvelaphi ngeenkwenkwezi zeVedic
IVedic Astrology sele iqhelisiwe kumawaka eminyaka. Imibhalo yokuqala ingafunyanwa kwiVedas -itekisi zakwamoya zamandulo ezivela kumaHindu- zezona ncwadi zindala zaziwayo emhlabeni, ekukholelwa ukuba ziphakathi kweminyaka engama-5000 nama-8000 ubudala. Igama lamaNdiya lokuvumisa ngeenkwenkwezi nguJyotish, elithetha 'isayensi yokukhanya', kuba kunjalo inzululwazi yokujonga izidalwa zasezulwini ezibonakalisa amandla kunye nokukhanya kwazo eMhlabeni, kwaye ngenxa yoko nefuthe ekuhambeni kweziganeko zabantu.
UGanesh, uThixo onentloko yendlovu, ukwanguThixo ngeenkwenkwezi. Abavumisi ngeenkwenkwezi baseNtshona basebenzisa iimephu zesibhakabhaka kwiifom setyhula, kanti Abavumisi ngeenkwenkwezi beVedic basebenzisa amakhadi amile okwere. Abavumisi ngeenkwenkwezi beVedic bahlula iidigri ezingama-360 zodiac kwiziseko ezingama-27 zenyanga.
-Fumanisa uphawu lwakho lweenkwenkwezi lwaseIndiya apha -
Njengomthetho wesithupha, ukufundwa kweenkwenkwezi kweVedic kugxile kwizikhundla zenyanga kunye anyukayo , kunelanga.
Fumana iplanethi yakho usebenzisa umhla wokuzalwa!
I-Vedic astrology isekwe kwiiplanethi ezilawulayo ezili-9, ngelixa ukubhula kwamanani eIndiya kuthathela ingqalelo ukuba intsingiselo yenani eliphakathi ko-1 ukuya ku-9 linxulunyaniswe neplanethi enxulumene noko.
Ukuzalwa ngo-2, 11, 20 okanye 29: una-2 kwaye uxhomekeke Chandra (Inyanga). Isini: ubufazi, ilitye: iparele
Uzalelwe ngo-3, 12, 21, okanye ngo-30: ungu-3 kunye nomhlaba wakho Utitshala (UJupiter). Isini: yindoda, ilitye: isafire
Uzalelwe ngo-4, 13, 22 okanye ngo-31: 4 Luxolo (iNorth Node). Isini: ubufazi, ilitye: iliso lekati
Uzalelwe ngo-5, 14 okanye ngo-23: inombolo yakho ngu-5 UBuddha (Imercury). Uhlobo: ukungathathi hlangothi, ilitye: i-emerald
Uzalelwe kwi-6, 15 okanye 24: 6 linombolo yakho, iplanethi yakho Shukra (UVenus). Isini: ubufazi, ilitye: idayimane
Ukuzalwa ngo-7, 16 okanye 25: una-7 kwaye uxhomekeke Apha (I-Node yaseMzantsi yeNyanga). Uhlobo: ukungathathi hlangothi, ilitye
Uzalelwe kwi-8, 17 okanye 26: inombolo 8, Shani (ISaturn) yiplanethi yakho. Uhlobo: ukungathathi hlangothi, ilitye: garnet
Uzalelwe ngomhla we-9, we-18 okanye wama-27: nge-9 uxhomekeke kuye Mangal (UMars). Isini: eyindoda, ilitye: ikorale ebomvu okanye itopazi
Luthini uphawu lwakho lweVedic?
Chonga uphawu lwakho lwe-zodiac yaseNtshona apha ngezantsi kwaye ufumane uphawu kunye neempawu zakho zeVedic.
Aries / Meṣa: uphawu lomlilo (ukhadinali) olawulwa nguMars
Ezona mpawu ziphambili: isenzo, ishishini, umbono
ITaurus / Vṛṣabha uphawu lomhlaba (olusisigxina) olulawulwa nguVenus
Iimpawu eziphambili: ukusebenza nzima, ukuthanda izinto eziphathekayo, ukudala, ukuthanda izinto ezintle
IGemini / iMithuna: uphawu lomoya (enokutshintshwa) ilawulwa yiMercury
Iimpawu eziphambili: uphando lwengqondo, ukungoneliseki, ukungazinzi
Umhlaza / iKarkaṭa: uphawu lwamanzi (ukhadinali) olulawulwa yiNyanga
Iimpawu eziphambili: intuition, ukuqonda ukungabikho kwengqondo kunye namaphupha
Leo / Siṃha: uphawu lomlilo (oluzinzileyo) olulawulwa liLanga
Ezona mpawu ziphambili: inkululeko, ukhuseleko, charisma
IVirgo / Kanyā: uphawu lomhlaba (olunokuguquguquka) lulawulwa yiMercury
Iimpawu eziphambili: ukukhangela ukugqibelela, ukulungiswa
ILibra / iTula: uphawu lomoya (ukhadinali) olulawulwa nguVenus
Iimpawu eziphambili: ukukhangela ibhalansi kunye nemvisiswano
IScorpio / Vcika: uphawu lwamanzi (oluzinzileyo) olulawulwa nguMars
Iimpawu eziphambili: khangela utshintsho lokomoya
Umhlaza / iDhanus; uphawu lomlilo (olunokuguquguquka) olulawulwa nguJupiter
Iimpawu eziphambili: imisebenzi emininzi, uhambo
ICapricorn / Makara: uphawu lomhlaba (ukhadinali) olawulwa nguSaturn
Iimpawu eziphambili: umnqweno wokuhlawula iakhawunti kunye nexesha elidlulileyo
U-Aquarius / uKumbha: uphawu lomoya (oluzinzileyo) olulawulwa nguSaturn
Iimpawu eziphambili: uluvo olunzulu loxanduva lokusebenzela ukulunga kwabanye
Iipisces / yeyam: uphawu lwamanzi (olunokuguquguquka) olulawulwa nguJupiter
Iimpawu eziphambili: umtsalane wokuqonda ubunzulu bolwandle lokuqonda.
Umxholo ongakumbi oya kukunika umdla:
Funda ngeenkwenkwezi zeAztec.
Bonisa uphawu lwakho lwe-zodiac yase-Egypt.
Fumanisa ngakumbi malunga neenkwenkwezi zaseMelika zaseMelika.
Zeziphi ezi-5 zeempawu zeZodiac ezenza abona baHlalani baPhezulu?
Zeziphi iimpawu zeZodiac ezenza aBona bazali baBalaseleyo? Isikhundla sethu sinempendulo
Ingelosi inombolo 888 intsingiselo
ndiphuphe onke amazinyo ewile
ndihlala ndibona iinombolo zam zokuzalwa naphi na
lithetha ntoni u-10: 10
Ngaba ii-aquarius kunye nomhlaza ziyahambelana